यी सुन्दरी युवतीले कुकुरसँग नि*यमित यस्तो गर्न थालेपछि… (हेर्नुहोस् भिडियो) -
यी सुन्दरी युवतीले कुकुरसँग नि*यमित यस्तो गर्न थालेपछि… (हेर्नुहोस् भिडियो)
भिडियो अन्तिम मा छ …
काठमाडौ । विश्वका कुनै–कुनै घटना अत्यन्तै अपत्यारिला छन् ।अहिले फेरी सुन्दर देखिन एउटी युवतीले गरेको हर्कत चर्चामा छ । हुन छ युवतीहरु आफ्नो सुन्दरताको लागि केसम्म गर्लान्रु डाइटिङ गर्लान्, महँगो सामान प्रयोग गर्लान्। यी त सामान्य भए। तर अमेरिकाकी एक युवतीले सुन्दर देखिनको लागि कुकुरको पिसाब पिउने गर्छिन्। राम्री देखिनको लागि आफूले दैनिक कुकुरको पिसाब पिउने गरेको उनले बताएकी छिन्।
लिन नाम गरेकी ती सुन्दरीलाई लामो समयदेखि धेरैजनाले उनको सुन्दरताको कारण सोधिरहेका थिए। त्यसको जवाफमा उनले आफूले दैनिक रुपमा कुकुरको पिसाब पिउने गरेको बताइन्। यसको प्रयोगले पिम्पलहरु नआउने र स्किनलाई चम्किलो राख्ने उनले बताइन्। लिनले पार्कमा लगेर कुकुरलाई पिसाब गराउने र त्यो जम्मा गरेर पिउने गरेकाृे बताइन्। अनुहार चम्किलो बनाउनको लागि उनले सधैँ आफ्नो कुकुरको एक कप पिसाब पिउने गर्छिन्। उनी भन्छिन, ‘कुकुरको पिसाबबाट भिटामिन ए, भिटामिन ई र १० ग्राम क्यालसियम प्राप्त हुन्छ। यसले क्यान्सर रोग लाग्नबाट बचाउँछ।’
१००० रुपैयाँको कोरोना बिमा गरे १ लाख रुपैयाँ पाइने, ४ सातामा करिब ५८ हजार जनाले बीमा गरे !
काठमाडौं । नेपालमा कोभिड–१९ को संक्रमण बढेसँगै चार साताभित्र ५७ हजार ९ सय जनाले कोरोना बिमा गरेका छन् । गत ४ वैशाखदेखि नेपाल बिमा समिति र नेपाल बिमक संघले सुरु गरेको कोरोना बिमाबाट २ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन भएको छ । मुलुकभर कोरोनाका बिरामी बढेसँगै कोरोना बिमा गर्नेको संख्या बढेको छ । १ हजार रुपैयाँमा बिमा गरेपछि १ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने भएकाले यसप्रति आकर्षण बढेको हो ।
बिमा समितिका सूचना अधिकृत निर्मल अधिकारीका अनुसार मंगलबारसम्म ५७ हजार ९ सयले बिमालेख खरिद गरेका छन् । बुधबारको तथ्यांक ढिला गरी प्राप्त हुने र १९ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीबाट संकलन गर्नुपर्ने भएकाले यकिन तथ्यांक नआएको उनले बताए । बुधबार बिमा खरिद गर्नेको संख्या अधिक रहेको उनले जानकारी दिए । २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीमध्ये १९ वटाले कोरोना बिमा पोलिसी बिक्री गर्न थालेका छन् ।
नेपालमा पीसीआर पद्धतिबाट परीक्षण थालेसँगै संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या दिनानुदिन बढ्न थालेको छ । नेपाल कोरोनाको अत्यन्तै जोखिमयुक्त क्षेत्र भनेर यसअघि नै विश्व स्वास्थ्य संगठनले चेतावनी दिइसकेको छ । नेपालमा अहिले समुदायस्तरमै कोरोना संक्रमण फैलिने क्रममा रहेकाले धेरै जना प्रभावित हुने सम्भावना रहेको छ । लकडाउनको बेला परिवारमा कसैलाई संक्रमणले भेट्यो भने उपचार गर्न पनि समस्या हुने देखिन्छ । सरकारले अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गरे पनि अन्य खर्चको व्यवस्थापनका लागि कोरोना बिमा गर्नुपर्ने बिमा विज्ञहरू बताउँछन् ।
कोरोना भाइरस बिमाको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै बिमा समितिले कोरोना भाइरस बिमालेखको सुरुवात गरेको हो । कोरोना बिमा गर्न ई–सेवामा आबद्ध सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीले यो सुविधाको सुरुवात गरेका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिलाई आर्थिक समस्या नहोस् भनेर यो सेवा सुरु गरिएको हो । यो बिमाअन्तर्गत ग्राहकहरूले व्यक्तिगत बिमा वा पारिवारिक बिमा रोज्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बिमा गर्न एक जनाको १ हजार वा ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
कोरोना बिमा लेख जारी गरेपछि १ हजार तिर्नेलाई कोभिड–१९ देखियो भने १ लाख रुपैयाँ र ५ सय तिर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कसैले परिवारकै बिमा गर्न चाहे प्रतिव्यक्ति ६ सय वा ३ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । ६ सय तिर्ने परिवारले प्रतिव्यक्ति १ लाख र ३ सय तिर्ने परिवारले प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने बताइएको छ । ५ जनाको परिवार छ भने ३ हजार रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्छ । परिवारका ५ जनालाई नै कोभिड–१९ देखियो भने ५ लाख र १ जनालाई मात्र देखियो भने १
← करुणाजी, ५५ वर्षे श्रीमानले है’रान पारे, के द’बाई छ ? पुरा पढ्नुहोस्…
तपाईलाई थाहा छ ? महिलाको गोप्य यौ’न व्यवहार यसरी पत्ता लाग्छ ! पुरा हेर्नुहोस्… →